အခန်းဆက် – alanlaymyar
ပိတုန်းတစ်ကောင်၏ငိုကြွေးသံများ (ဇတ်သိမ်းပိုင်း) အဲဒီနေ့က ညနေ ၄ နာရီခွဲလောက်ကြီးပေါ့ ။ သူရယ် စိုးလေးရယ်က တဖက် မမြင်ဘူးတဲ့ လူတွေ ၈ယောက်လောက်က တဖက် စကားများနေကြတာ ။အနားရောက်သွားတော့ မိုးလေးက စိန်ခေါ်နေပြီ ။ ဟိုဖက်ကကောင်တွေကတုတ်တွေပါ ပါလာကြတာ။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြတယ်ထင်တယ် ။ မိုးလေးကဒေါသတော်တော်ထွက်နေတာ မျက်နှာလေးက တင်းပြီး ရဲနေတာပဲ ။ အနားရောက်သွားတော့ ပွဲကစနေပြီ ။ စိုးလေးဆီက ကယ်ပါ ယူပါ နဲ့ အော်သံတွေထွက်လာတယ် ။ မိုးလေးက ပြန် ခံ ချတယ်၊ဘယ်ရမလဲ ခံရတာပေါ့။ မိုးလေးခွေခနဲ လဲတဲ့ချိန်မှာပဲ မုန်းတိုင်းတခုလို ဝင်လိုက်တယ် ။ ပွဲကပြောင်းပြန်ဖစ်သွားတယ် ။ သိုင်းပြောင်းပြန်ရဲ့ အားသာချက်က အဲ့တာပဲ ။ တယောက်ချင်းလဲ အဆင်ပြေတယ် […]
Posted on October 18, 2019 October 18, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
ပိတုန်းတစ်ကောင်၏ငိုကြွေးသံများ (အပိုင်း ၂ )
ပိတုန်းတစ်ကောင်၏ငိုကြွေးသံများ (အပိုင်း ၂ ) ဆေးထည့်ပြီး ပလာစတာကပ်ပေးလိုက်တယ် ။ အနီးကပ်ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းမသိခင်ပဲ နဖူးလေးကို ညင်ညင်သာသာနမ်းလိုက်မိတယ် ။ ၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့ “အင်း … ကျွတ် … ကျွတ် ” ဆိုပြီးသတိရလာတယ် ။ကိုယ့်လဲမြင်ရော ဗြုန်းဆိုထတယ် ။ ကြည့်နေလိုက်တယ် “ခင်ဗျား မယုတ်မာနဲ့” အယ် … သူပြောမှပဲ မနေ့ကအလှတွေ မြင်ယောင်လာပြီး ညီလေးကတင်းလာတယ် ။ “မင်းရှူံးသွားပြီလေ … ဒီမှာတိုင်ပင်” ပြောပြောဆိုဆို နာရီကို အချိန်စမှတ်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ သူ့ကို ဖက်နမ်းလိုက်တယ် ။ အစတော့ကြောင်နေသေးတယ် ။ ခုတင်ပေါ် ပက်လက်လန်ပြီး အပေါ်ကဖိထားမှ သတိဝင်လာတယ် ။ ရုန်းတာမှတအားပဲ ။ ရုန်းနေတဲ့ကြားကပဲ […]
ပိတုန်းတစ်ကောင်၏ငိုကြွေးသံများ (အပိုင်း၁) ဒီလိုဗ် ! ကျနော့ ဆရာက သူ့အိမ်တွက် တာဝန်ပေးရာကနေစတာပဲ ။ အင်း ကျနော့ကြောင်းလေးနဲနဲပြောထားမှ အိုကေမယ်ဗျ ကျနော်နာမည်က အုပ်စိုး ။ အသက်က ၂၈ ။ ရုပ်ကတော့ တွမ်ခရု လောက်ပေါ့ ။ ဘော်ဒီတောင့်တောင့် ။စကား ရွှက်နောက်နောက် ပြောတက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါ ( ကြွားကြည့်တာ ) ဒီဇိုင်းပိုင်း ပိုကျွမ်းတယ်ဗျ ။ ဘိုးတော်က သာကေတမှာခြံ တခြံဝယ်လိုက်တာ ကျနော့တွက်ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလာမသိပါဘူး ။ လမ်းတွေကို ရပ်ကွက်နာမည်မှာ နံပါတ်တွေတပ်ပြီးခေါ်တဲ့လမ်းထဲမှာပေါ့ ။ ဘိုးတော်က အယ်နေဦးဗျ ဘိုးတော်ဆိုတာ ကျနော့ဆရာပါ၊ကျောင်းပြီးခါစထဲက အစစအရာရာ သင်ပေးတဲ့ဆရာပါ ၊သဘောလဲကောင်းတယ်နှမျောတွန့်တိုတာလဲမရှိဘူး ။ ဆရာ ဆိုတာထက်ဖအေလိုကိုကောင်းတာဗျ၊တော်တာလဲအရမ်းပဲ Archi ကော […]
ထင်မထားတဲ့အလှည့် အပိုင်း(၃) (အင်းစက် အတွေ့အကြုံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ မနှစ်သက်သူများဆန္ဒမရှိပါက မဖတ်ရှုကြပါရန်၊) မြန်မာပလာဇာအပေါ်ထပ်က ရက်စတောရင့် ပတ်ဘ်တစ်ခုရဲ့ အလင်းရောင်မှိန်မှိန်အထူးခန်းလေးထဲမှာ ကျနော်တို့ (သားအမိလို့ခေါ်ရမလား၊ လင်မယားလို့ခေါ်ရမလား) ၂ယောက် နေ့လည်စာစားနေကြတယ်။ “ကဲ..ကိုယ်တော်လေး..ညက ညကြီးမင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ..” “နေရင်းထိုင်ရင်းမကိုအကြီးအကျယ်သတိရလာလို့” “ဒါနဲ့..သူများကိုဘာပြောသွားတာလဲ..” “မကိုချစ်တယ်လို့လေ..” “မြန်လှချည်လားကွာ..မနေ့ကမှတွေ့တာ နေ့ချင်းညချင်းချစ်စကားပြောတယ်ပေါ့၊ မိန်းမသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုယုံရမှာလဲ” “မသိဘူးဗျာချစ်သွားတာပဲသိတယ်၊ မနဲ့နီးနီးနေချင်လို့ချက်ချင်ပြန်ဆက်မိတာ” “သေချာလို့လား..၊ ကိုယ့်အမေကိုယ်ချစ်ရေးဆိုနေတာကိုလေ..” “အဲ့ဒါကြီးကိုမေ့ထားလိုက်စမ်းပါဗျာ၊ မနေ့ကကျနော်စကားကုန်ပြောပြီးပြီပဲ၊ အခုကျနော်တို့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်း ၂ယောက်သားကြည်ကြည်နူးနူးအတူနေကြဖို့ ခေါ်လိုက်တာ၊ တစိမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိ်သွားလို့ရော၊ သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားလို့ရော ကြေးစားလိုစိတ်ထဲမှာထားမဆက်ဆံနိုင်တော့ဘူး၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်သွားမှ ဆက်ဆံရေးလေးကပိုပြီးသိမ်မွေ့သွားမှာမဟုတ်လား” “ဘော့စ်ကချစ်တယ်ပဲပြောတာ၊ ဘာမှပြန်ပြီးအဖြေမတောင်းဘူးမဟုတ်လား၊ ဒီကလဲအခုအချိန်မှာ အဲ့ဒီအဖြေမျိုးပေးဖို့ဘယ်လိုမှမစဉ်းစားရဲဘူး၊ အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာတွေကအရမ်းမြန်တယ်၊ မျှော်လဲမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ တို့တွေဘာတော်လဲဆိုတာကိုသိထားတဲ့အမှန်တရားကလဲစိတ်ထဲမှာခြောက်နေသေးတယ်။ အချိန်ကြာသွားရင်တော့မပြောတတ်ဘူး။ အခုအချိန်ဘာမှမှတ်ချက်မပေးပါရစေနဲ့ဦး၊ ဘော့စ်ပျော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အသင့်ပဲ” သူမက စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ကျနော့်လက်ဆီကိုလှမ်းလိုက်ပြီးဖွဖွလေးအုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်ရင်းပြောလိုက်တယ်။ သူပြောတာအမှန်တွေမို့ကျနော်ငြိမ်ပြီးပဲနားထောင်နေပြီးဘာမှပြန်မပြောမိဘူး။ “ကဲ..မောင်ပျော်ချင်တယ်ဆိုရင်..မောင်ဘယ်ခေါ်သွားသွား မ လိုက်မယ်..သိလား..အခုဘယ်ဆက်သွားကြမှာလဲ..” သူ..ကျနော့်ကိုလိုက်လျောတဲ့အနေနဲ့ […]
ထင်မထားတဲ့အလှည့် (အင်းစက် အတွေ့အကြုံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ မနှစ်သက်သူများဆန္ဒမရှိပါက မဖတ်ရှုကြပါရန်၊) အပိုင်း(၂) ကျနော်လဲသူဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိပဲ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ ကျနော်အိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံကလွဲလို့ဘာအထူးစိတ်ဝင်စားစရာလဲမရှိဘူးလေ။ “လုပ်စမ်းပါဦးဗျ၊ ပြပါဦးဘာများလဲ ! ဘာတွေစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့နေလို့လဲ..” “ဒီမှာလေ..ဒါဘယ်သူ့ဓာတ်ပုံလဲ..!” ကျနော်တစ်ချက်လှမ်းရှိူးလိုက်တော့သိလိုက်ပြီ။ ဓာတ်ပုံဆိုလိ့ကျနော်ထည့်ထားတာ တစ်ခုပဲရှိတာကိုး။ “သြော်..ဒါလား..၊ အမျိုးသမီးကလှတယ်မဟုတ်လားဗျ၊ အဖိုးကပြောတော့အဲဒါကျနော့်အမေပုံဆိုပဲ..အဖိုးပေးထားလို့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ထားမိတာ” ဒီလိုပြောလိုက်မိတာနဲ့ပဲ မ၀င်နီဆိုတဲ့ဆော်ကြီးအတော်ကြီးကိုအလန့်တကြားဖြစ်သွားပုံရတယ်။ လက်တစ်ဘက်ကိုမြှောက်ပြီးအံ့သြလွန်းလို့ဟသွားတဲ့ပါးစပ်လေးကိုပိတ်လိုက်တာ၊ လက်တွေကတဆတ်ဆတ်တုန်နေတာသိသာလှတယ်။ “မဟုတ်ဘူးး…မဟုတ်ရဘူး..မဖြစ်နိုင်ဘူး…” သူမပါးစပ်ကတတွတ်တွတ်ရေရွတ်နေတယ်လေ။ “ဘာ..မဟုတ်ရမှာလဲဗျ။ အဖိုးပြောတာ..ဒါကျနော့်အမေပုံပဲတဲ့..” ဆော်ကြီးကျနော့်ကိုမျက်လုံးဝိုင်းကြီးနဲ့ကြည့်ပြီး၊အံ့သြတကြီးနဲ့မေးလာတယ်။ “မင်းအဖေနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ၊ မင်းအမေကရောဘယ်သူလဲ..” “ဟင်..ကျနော် ဟိုတယ်လေးတစ်ခေါက်လာလည်မိပါတယ်၊ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ပါပေးရတော့မှာလား၊..” သူမကခေါင်းကိုဆတ်ဆတ်ခါရမ်းပြီး အသံတုန်တုန်လေးနဲ့..၊ “အရင်သာဖြေစမ်းပါလေ..” “ကျနော့်အမေကလား၊ ကျနော်နာမည်အတိအကျမသိဘူး၊ လူကြီးတွေဆီက နားစွန်နားဖျားကြားဘူးတာက၀င်းဝင်းဆိုလားဘာလား၊ ကျနော်စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ကျနော့်ကိုမွေးပြီးလသားပေါက်စကထဲကကျနော့်ကိုပစ်သွားတာ။ ကျနော့်အဖေနာမည်ကဦးသက်ပိုင်..” အဲ့ဒီမှာပဲ သူကလက်၂ဘက်နဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ပြီးငုံ့ဆင်းသွားတယ်၊ ရှိုက်သံတစ်ချက်ထွက်လာသလိုပဲ။ကြည့်ရတာငိုတော့မယ့်ပုံစံ.. ကျနော်ကသူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး၊ သူ့ကျောလေးကိုသပ်ပေးရင်းနဲ့.. “ဘာဖြစ်သွားရတာလဲ..! စိတ်ပြောင်းပြီးပေးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုလဲရပါတယ်။ ငိုပြဖို့မလိုပါဘူးဗျာ..” သူမကတစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိုက်ပြီးကျနော့်ဘက်လှည့်လာတယ်။ သူ့လက်လေးတွေမြောက်လာပြီးကျနော့မျက်နှာနဲ့ပါးလေး၂ဘက်ကိုကိုင်ကြည့်ပြီးပွတ်သပ်ပေးနေတယ်။ […]
ထင်မထားတဲ့အလှည့် အပိုင်း-၁ (လမင်းကြီးရေးသည်။) အင်းစက် အတွေ့အကြုံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ မနှစ်သက်သူများဆန္ဒမရှိပါက မဖတ်ရှုကြပါရန်၊ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ထင်မထားတဲ့အလှည့် (၁) မွေးနေ့ကျော်ခဲ့ပြီလေ။ ကျနော် ‘ဘော့စ်’ ဆိုတဲ့ကောင် အသက်၂၀ထဲဝင်ခဲ့ပြီပေါ့။ ဘ၀မှာဂြိုဟ်စီးဂြိုဟ်နင်း ကံဇာတာဆိုတာအလှည့်အပြောင်း အတက်အကျရှိတယ်တဲ့၊ ကြားဖူးတာဖတ်ဖူးတာပြောပါတယ်၊ ကျနော့်ကံဇာတာကမွေးလကျော်ရင်ပိုလို့တောင်ကောင်းဦးမယ်တဲ့ဗျ။ ကျနော့်ဂြိုဟ်ခွင်ဇာတာက မွေးခါစကအရမ်းညံ့ခဲ့ပြီး၊ အရွယ်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းဘာနဲ့နှိမ်နှိမ်၊ နှိမ်လို့မရအောင်အရမ်းတိုးတက်ချမ်းသာဦးမယ်လို့၊ ကျနော်ဘကြီး ဗေဒင်ဆန်းကျမ်းအတတ်ကိုအရမ်းလေ့လာပြီး အခုဆရာတစ်ဆူလိုဖြစ်နေတဲ့ ဘဦးအောင်ဘော်ကပြောဘူးတယ်။ ဒါတွေကျနော်ကသိပ်အယုံအကြည်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေကိုမယုံရလောက်အောင်ကလဲ ကျနော့်ဘ၀ကအရမ်းပြည့်စုံနေတယ်။ အခုပြောနေတာကလဲစကားစပ်မိလို့သာပါ။ ဟုတ်တယ်…ကျနော်ငယ်ငယ်က(မမွေးမီကထဲကဆိုပါတော့) ကျနော်တို့မိသားစုဟာကုန်းကောက်စရာတောင်မရှိဘူးဆိုရလောက်အောင်၊ ဆင်းရဲခဲ့၊ မွဲတေခဲ့ဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်၁၀နှစ်သားအရွယ်ကျော်လာကထဲကစပြီး ဘ၀ပေးအခြေအနေတွေအလိုလိုကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ မမျှော်လင့်တဲ့စီးပွားရေးတွေအစပ်အဟပ်ဂွင်တဲ့ပြီးချမ်းသာလာရင်း၊ လုပ်ငန်းတွေချဲ့ရင်း၊ အောင်မြင်လာလိုက်တာ၊ အခုတော့လဲ ၁၀နှစ်အတွင်းမှာ၊ စောစောကပြောခဲ့တဲ့၊ ကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့ဘ၀ကနေ၊ ပိုက်ဆံဆိုတာထားစရာနေရာမရှိတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။ အခြေအနေခိုင်ပြီးအသိုင်းနဲ့အ၀ိုင်းနဲ့ အဖိုးတို့အဖွားတို့ဆိုရင်လဲဂုဏ်သရေရှိလူကြီးစာရင်းဝင်လာခဲ့ပြီလေ။ နွေးထွေးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိသားစုကြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်မှာ အမေဆိုတာ၊ မူးလို့ရှူစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်လူမှန်းသိတတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီး၊ အဖေနဲ့ […]
မွေးပြီး အ၀စား လင်ပါသား ( ၃ )
မွေးပြီး အ၀စား လင်ပါသား ( ၃ ) ဇာခြည်ဝင်းကားဖင်ကြီးကော့တက်ပြီး တစ်အင်းအင်းတအားအားနဲ့ စောက်ပတ်ယက်ပေးတာကိုခံလို့ပြီးဆုံးသွားပြီ။ သူမကရာဇာကျော်ရဲ့လီးကြီးကို လက်နဲ့ဂွမ်းတိုက်ပြီးပြန်ဆွပေးလိုက်တာနဲ့ ရာဇာကျော်လီးကြီးဟာ သံဒုတ်ကိုရော်ဘာစွပ်သလိုပဲ အကြောတစ်ပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ထောင်ထလာတာပါ… ရာဇာကျော်ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းလိုက်ပြီး သူမကရာဇာကျော်ပေါ်ခွထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကဲ..သားရာဇာကျော်..မေလေးသားကို လိုးနည်းတင်ပေးတော့မယ်နော်… ရာဇာကျော်ကား ဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုလိုးရမှန်းမသိ.. ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဖြစ်သောသူမကသာ သင်ပေးရတော့မည်.။ ရာဇာကျော်ရဲ့လီးကို သူမလက်နဲ့နောက်ပြန်ကိုင်လိုက်ပြီး သူမအဖုတ်ဝနဲ့တေ့ပြီးပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အင်း..ကျဉ်တယ်..မေမေလေး.ရဲ့.. ခ်ခ်…ပြီးရင်ပိုကောင်းလာမှာ သားလေးရဲ့.. ဇာခြည်ဝင်းကား ရာဇာကျော်ရဲ့လီးကြီးကို သူမအဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို ဖြည်းညဉ်းစွာထည့်ပြီး တဖြည်းဖြည်းဖိထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ရာဇာကျော်ရဲ့အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်မှ မလိုးရသေးတဲ့ လူပျိုစစ်စစ်လီးတံကြီးဟာ သူမစောက်ပတ်ထဲကို ၀င်သွားပြီး စောက်ပတ်နံရံတွေကို ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ အရသာထူးကြီးကိုသူမမေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရာဇာကျော်ရဲ့လီးထိပ်ကလည်းနွေးသလိုလိုလို..အေးသလိုလိုနဲ့ရင်ထဲတလှပ်လှပ်ခံစားနေရပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့လီးတံကြီးဟာ မေမေလေးရဲ့စောက်ဖုတ်အတွင်းကို တစ်ဆုံးထိဝင်သွားပြီး မေမေလေးစောက်ပတ်ထဲက အိစက်နေတဲ့အရာနဲ့ဖိထောက်မိကာ ရပ်သွားပါတော့တယ်။ ဇာခြည်ဝင်းက ရာဇာကျော်ကို သားလက်နှစ်ဖက်ကို မြောက်လိုက် […]
မွေးပြီး အ၀စား လင်ပါသား ( ၂ )
မွေးပြီး အ၀စား လင်ပါသား ( ၂ ) လာကြိုသည့်တစ်လမ်းလုံးမေမေလေးဇာခြည်ဝင်းကသူ့ကိုစကားသိပ်မပြောဟုထင်သည်။ ကားကိုသာအာရုံစိုက်မောင်းနေတာကိုတွေ့ရသည်။ ခါတိုင်းဆိုလျှင်သူ့ကိုစကားများရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောတတ်သောမေမေလေးစကားနည်းနေသဖြင့် ရာဇာကျော်စိတ်ထဲထင့်နေသည်။ ကျူရှင်အဆင်းမှာ ထုံးစံအတိုင်းကားပေါ်တက်ပြီးမေမေလေးဇာခြည်ဝင်းကိုစောင့်နေစဉ် သူ့ကိုချွန်လေ့ရှိသော မြတ်သူ၏မိဘများနှင့်မေမေလေးနှုတ်ဆက်ရင်းစကားပြောနေတာကိုတွေ့ရသည်။ သူနေ့လည်ကဖြစ်သောအကြောင်းကိုသေချာပေါက်ပြောတာသေချာသည်။ မေမေလေးကားတစ်လမ်းလုံးသူ့ကိုဟက်ဟက်ပက်ပက်စကားမပြော။ စိတ်ဆိုးနေဟန်တူသဖြင့်သူလည်းမပြောရဲ။ အိမ်ကိုရောက်တော့လည်း အခန်းထဲသို့တန်းဝင်သွားသည်။ သူလည်းမေမေလေးစိတ်ဆိုးနေမှန်းရိပ်မိသဖြင့် သူ့အခန်းသူဝင်ပြီး အသာလေးနေလိုက်သည်။ သို့သော်..သူထင်တာမှန်ပေမဲ့ မေမေလေးစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့သူထင်နေတာကတော့မမှန်မှန်းမကြာခင်သူသိလိုက်ရပါတယ်။ သားရေ..မေမေလေးအခန်းကိုလာဦး. မေမေလေးဇာခြည်ဝင်းရဲ့အခန်းက သူ့ကိုခေါ်တဲ့အသံကထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူလည်းစိုးထိတ်စွာနဲ့မေမေလေးအခန်းထဲကိုတုန်ယင်စွာနဲ့ လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်။ မေမေလေးကားကုတင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာပါ။ အပြာရောင်ဝမ်းဆက်ဝတ်စုံနဲ့မေမေလေးဇာခြည်ဝင်းဟာဒီနေ့သိပ်လှတာပဲလို့သူထင်မိပါတယ်။ သားဒီမှာလာထိုင်ဆိုတာကြောင့် မေမေလေးရဲ့ကုတင်စောင်းမှာသူဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ သားကိုမေမေလေးမေးစရာရှိတယ်..သားအမှန်အတိုင်းဖြေနော်..လို့မေမေလေးကစကားစလိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့..မေမေလေးမေးပါ.. သားဒီနေ့အခန်းထဲမှာ ဆရာရိုက်တာခံရတယ်ဆို..။ ဟိုဟို..လေ ဟင်းဟင်းသားရယ်…သားတို့အရွယ်တွေကဒါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မေမေလေးသိပြီးသားပါ.. မေမေလေးနှုတ်မှထွက်လာတဲ့စကားကြောင့် သူအံ့သြသွားပါတယ်။ သူထင်တာကမေမေလေးဇာခြည်ဝင်းကသူ့ကိုအရမ်းစိတ်ဆိုးနေတယ်ထင်တာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်သားကိုမေမေလေးကကောင်မလေးတွေနဲ့မပတ်သက်စေချင်တာ.. ကဲခုတော့ရိုက်ခံရပြီ… ပြစမ်းပါဦးသားဒဏ်ရာတွေ.. သူကခြေသလုံးမှကြိမ်လုံးရာများကိုလှန်ပြလိုက်သည်။ နေဦး တင်ပါးရောရိုက်သေးလား… သားပုဆိုးချွတ်လိုက်စမ်း.မေမေလေးကြည့်ရအောင်.. မေမေလေးဇာခြည်ဝင်းစကားကြောင့်သူပုဆိုးချွတ်ရန်ပြင်လိုက်သော်လည်း ဘာဖြစ်မှန်းမသိရှက်သလိုလိုခံစားရသဖြင့်…မချွတ်ရဲဖြစ်နေသည်.. ဟွင်း..နေ့လည်ကကောင်မလေးကိုရည်းစားစာပေးတော့မရှက်ဘူး… ကိုယ့်မေမေလေးကျမှရှက်နေတယ်ဆိုပြီး.. ရာဇာကျော်ပုဆိုးကိုဇာခြည်ဝင်းက ဖြုန်းခနဲဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ […]
မွေးပြီး အ၀စား လင်ပါသား ( ၁ ) မေမေလေးရေသားကျောင်းပြန်လာပြီ.. ရာဇာကျော်ကား ကျောင်းပြန်လာတာနဲ့ လွယ်အိတ်ကိုပစ်ချပြီး ဇာခြည်ဝင်းရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်လိုက်သည်..။ ဇာခြည်ဝင်းကား ရာဇာကျော်၏ ပါးလေးများကို တရှုံ့ရှုံ့နမ်းလိုက်သည်။ ရာဇာကျော်ကား(၁၈)နှစ်ခန့်သာ ရှိသေးသော်လည်း လူကောင်ကြီးကထွားကြိုင်းလှသည်။ ကောင်လေးကား(၁၀)တန်းသို့ရောက်နေပြီ။ ကလေးစိတ်မပျောက်သေး။ ဧည့်ခန်းတွင် ဇာခြည်ဝင်းနှင့် သူမသူငယ်ချင်း ကေသီထွန်းသို့ စကားပြောနေတာကို သူမရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်လာသည်…။ ကဲ..ထမင်းစားလိုက်ဦး.။ သားကြိုက်တဲ့ပုစွန်ထုပ်ချက်ထားတယ်။ အေးမရေ သားဖို့ ထမင်းပြင်ထားပြီးပြီလား။ နောက်ခန်းမအေးမနှင့် ထမင်းချက်ဒေါ်ကြီးစိုးမှ ပြင်ထားပြီးပါပြီရှင့်မမလေး…။ ကဲ..သားသွားစားတော့၊ ပြီးရင်မာမီသားကိုရေချိုးပေးမယ်ဟု ဆိုပြီးရာဇာကျော်ကို နောက်ခန်းသို့လွှတ်လိုက်သည်။ ကေသီထွန်းက ဇာခြည်ဝင်းကို အဓိပ္ပါယ်ပါသောမျက်လုံးများဖြင့် ပြုံးစိစိလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ဘာလဲ.ကေသီရဲ့..ညဉ်းကလဲ..ဇာခြည်ဝင်းက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့်မေးလိုက်သည်။. ကေသီထွန်းကအနားတိုးလာပြီး.. ဟင်းဟင်းဇာခြည်တို့ကတော့ ချစ်နေလိုက်တာ..လင်ပါတဲ့သားကို.သူ့သားကျနေတာပဲ.. သိတယ်နော်..မိဇာခြည်သိတယ်… ညည်းအကြောင်း…ခုချိန်ထိကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးတယ်ဆိုကတည်းက.. ကောင်လေးကလဲထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနဲ့ သန်မဲ့ပုံလေး။ မဟုတ်ရပါဘူးဟယ်..ညဉ်းကလည်း.. ဟင်းဟင်းသိနေတယ်နော်ဇာခြည်..ကောင်လေးကညဉ်းစားမယ်ဆိုစားလို့ရပြီ.. ညဉ်းတစ်ယောက်ထဲခိုးမစားနဲ့ ငါတို့ကိုလည်းမျှပေးရမယ်..ဟင်းဟင်း […]
( ၆ ) လွှမ်းလို့ကျန်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ်လေ
လွှမ်းလို့ကျန်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ်လေ ( ၆ ) ဇော်ဇော်အောင်က ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အနီးကပ်မြင်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ လိမ်ကောက်ကောက် စောက်မွေးနုနုလေးတွေကြားက ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့အဆီတစ်ထပ်အသားတစ်ထပ်နဲ့ အရေတွေရွဲနေတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးက မွေးအီအီစောက်ပတ်ရနံ့ကို သူရနေပါပြီ။ ဒါကြောင့်ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကိုအသာဖြဲပြီး စောက်ခေါင်းထဲကို လက်ခလယ်နဲ့နိုက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့ပဲကြီးစေ့ခန့်စောက်စိကြီးကမာထောင်လာပါတယ်. ဒါကြောင့်ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့စောက်ပတ်ကိုဖြဲပြီးစောက်စိကိုလျှာနဲ့ဖိယက်လိုက်ပါတယ်။ ရှီးအား..သားရေး..အိုးအိုး စောက်ခေါင်းထဲကသေးဖြန်းဖြန်းထွက်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတာကြောင့် ဒေါ်စုစုလွင်ပေါင်ကို ကမန်းတမ်းစိလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဇော်ဇော်အောင်ကလည်းမညှာပါဘူး။ ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့ပေါင်တံနှစ်ဖက်ကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မလှုပ်နိုင်အောင်ဖိပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်းနံရံတွေကိုပါ..လျှာနဲ့မွေပေးပါတော့တယ်။ အား..အင်း..သားရေ..မလုပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့..ပြတ်ပြတ်..ရှီးအားအား သူမပါးစပ်မှကယောင်ကတမ်းတွေအော်ကုန်ပါပြီ..။ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လျှာအရသာကြောင့် စောက်ခေါင်းထဲမှသေးဖြန်းဖြန်းထွက်မတတ်ခံစားနေရတာကြောင့် သူမလက်နှစ်ဖက်ကလည်း မွေ့ယာတွေကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကိုကိုက်ထားပြီး ဖင်ကြီးကလည်းတစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကိုကော့တက်နေပါတယ်။။ ဇော်ဇော်အောင်ကလည်းဒါကိုသိတာကြောင့် ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့ စအိုပေါက်ကိုပါယက်ပေးပါတယ်။ ဖင်ကိုယက်ပေးရင် ဘယ်မိန်းမမှမခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်လေ.။ ပြီးတာနဲ့ဖင်ထဲကိုသူ့လက်ခလယ်ကိုထည့်လိုက်ပြီး စောက်စိကိုဖိဖိပြီးယက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒေါ်စုစုလွင် စောက်ရေတွေဟာမထိန်းနိုင်ပဲ စောက်ပတ်ထဲကနေတလိပ်လိပ်ထွက်ကျပြီး သူမဖင်ကြားမှတစ်ဆင့်လိမ့်ဆင်းပြီး မွေ့ယာပေါ်မှာအကွက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဇော်ဇော်အောင်ကလည်းပညာကုန်သုံးပြိး ယောက္ခမလှလှကြိးကို ဘာဂျာအစုပ်အမှုတ်ပညာပြလိုက်တာ ဒေါ်စုစုလွင်လည်းငယ်သံပါအောင်အော်ဟစ်ပြီး (၂)ချီမြောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ […]
Posted on September 21, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
Total visitors : 32,547
Total page view: 115,441